Rosary yanamhlanje Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
El irosari yanamhlanje inxulunyaniswa ngokukodwa nosuku oluhambelanayo lweveki kunye nohlobo olunxulumene noko. Namhlanje siza kukuxelela ngokupheleleyo ukuba yeyiphi ehambelana nomhla ngamnye.
1 Wazi njani ukuba yintoni irosari namhlanje?
3 Zithini iintsuku?
3.1 Iimfihlelo ezivuyayo
3.2 Iimfihlakalo ezibuhlungu
3.3 Iimfihlakalo ezizukileyo
3.4 Iimfihlakalo eziqaqambileyo
Wazi njani ukuba yintoni irosari namhlanje?
Indlela othandaza ngayo irosari Kungokulamla kunye nokusetyenziswa kwemithandazo eyahlukeneyo, enje ngoBawo Wethu Osezulwini, Dumisa uMariya noZuko Kukho umyalelo owaziwayo kuwo onke amakholwa; Nangona kunjalo, ukufunda okungakumbi ngendlela yokwenza, simema ukuba ufunde inqaku elilandelayo Indlela yokuthandaza iRosari ngokulula?.
Ukuba ufuna ukuthandaza irosari yanamhlanje Ngendlela ezolileyo neyoxolo, kubalulekile ukwazi ukuba yintoni imfihlakalo ehambelana nosuku ngalunye lweveki.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo zazintathu kuphela iimfihlakalo ezisekwe ekuzalweni komzimba nakubomi obufihliweyo bukaKristu, obabubizwa ngokuba ziimfihlelo zovuyo nezonwabisayo; abo banxulumene nokubandezeleka kunye nokuthanda kukaKristu okubizwa ngokuba buhlungu okanye kubuhlungu kwaye kubiza iminxeba ezo ezo zisekwe kukoyisa kovuko nokunyukela kweNkosi ezulwini.
Kodwa ngo-2002, ngobungcwele bakhe uJohn Paul II, kwabizwa incwadi enegama elithi Rosarium Virginis Mariae (ibhokisi yeNtombikazi enguMariya), eyayiphethe kungekuphela nje ngokuchaza ezona zizathu zemfihlakalo, kodwa zaye zagqiba ekubeni zibandakanye enye eyongezelelweyo ebizwa ngokukhanya okanye ukukhanya. Ngenxa yoko, ubungcwele bakhe buchaza inkqubo ngendlela enomdla:
«Ukuze sikwazi ukuthi iRosari 'isisongelo seVangeli' ngokupheleleyo, kufanelekile ke ukuba, emva kokukhumbula ukuzalwa komzimba nobomi obufihliweyo bukaKrestu (iimfihlelo zovuyo), nangaphambi kokujonga iintlungu zomnqweno. (iimfihlakalo zentlungu) kunye noloyiso lovuko (iimfihlelo zobuqaqawuli)
Ukucamngca kukwajolisa kumaxesha athile abalulekileyo kubomi boluntu (iimfihlelo zokukhanya). Oku kudityaniswa kweemfihlakalo ezintsha kujoliswe ekubeni kumenze aphile nomdla ohlaziyiweyo kwimo yokomoya yobuKristu, njengesingeniso sokwenene kubunzulu bentliziyo kaKristu, enzonzobileni yovuyo nokukhanya, iintlungu nozuko »
Imfihlelo nganye imisela umthandazo kwi irosari engcwele egqiba izinto ezithile ezinxulumene nobomi kunye nokuthanda kweNkosi yethu uYesu Krestu kunye noMama oyiNgcwele.
Njengoko besesichazile ngaphambili, aba baphethe umsebenzi wokuphinda benziwe imithandazo yokuzalwa kukaNyana kaThixo, uTyelelo lweNtombikazi enguMariya, umzala wakhe uElizabhete, ukuzalwa koNyana kaThixo, ukuziswa kukaYesu eTempileni, abalahlekileyo Umntwana onguYesu.kwaye wafunyanwa etempileni.
Zenzeka ngeMivulo nangoMgqibelo, zinokwenziwa ngokukodwa, ngokudibeneyo okanye ekuhlaleni. Abanyanisekileyo banokhetho lokwenza ezi zinto suku ngalunye lweveki xa kufanelekile; ke umthandazo wanamhlanje kufuneka unxulumene nemfihlakalo ehambelana nawo.
Zenzeka ngolwesiBini nangooLwezihlanu kwaye baphethe ngokuhlaziya amaxesha eNkosi yethu uYesu Krestu xa wayethandaza eGadini, kunye nenyani malunga nokutyakatywa kwakhe, isithsaba ngameva, uYesu enomnqamlezo esendleleni eya eKalvari Ukubethelelwa emnqamlezweni nokufa kukaYesu.
Zizinto ezingaqondakaliyo apho ixesha loVuko lukaYesu, ukunyukela ezulwini, ukufika kukaMoya oyiNgcwele, ukuqikelela kukaMariya ezulwini, kunye nokubekwa kwakhe esihlalweni njengoKumkanikazi kunye neNkosikazi yayo yonke indalo kukhutshwa, umthandazo wanamhlanje wenziwa ngolwesiThathu ICawe.
Ezona zintsha zenziwe nguSanta John Paul II zimiselwe ngokukodwa ukubonisa imithandazo yokubhaptizwa kukaYesu eYordan, umtshato waseKana, ukubhengezwa koBukumkani bukaThixo, ukwenziwa kumila kumbi kunye nokusekwa kwe-Ekaristi. Yenzeka ngoLwesine okanye ngemihla ekhumbulekayo njengoko kumiselwe yicawa.
Ukuthandaza i-rosari kuye kwavela ngaphezulu kweminyaka eli-100 yembali, okoko yaqalayo yayimele inkcubeko yenkolo kwaye yayihlengahlengisa inkcubeko kunye ne-idiosyncrasies yamazwe. Siyabona namhlanje, indlela abakwenze ngayo kwezinye iindawo ukwenza umthandazo wanamhlanje ngengcwele guadalupano rosario okanye ingcwele irosari yenceba kaThixo.
Imithandazo nganye yanamhlanje yenziwa ngokungqinelana nolwakhiwo oluchaziweyo kulowo nalowo, kugcinwa iiakhawunti kwaye kugcinwa imitya, ukuze kuthandazwe uBawo wethu, iNtombi enguMariya kunye nozuko oluyimfuneko kwimfihlelo nganye.
Kwamanye amazwe singayibona indaleko okanye utshintsho kwizinto ekuthiwa ziimfihlakalo zamaLuthere, ezinikezelwe kuphela ekunikeni amagama kwimithandazo yosuku, kwimithandazo esekwe kubomi nakwinyani kaMama kaYesu. Nangona bembalwa abaziwayo konke konke el mundo, inani elikhulu labathembekileyo kule mimandla bangabazinikeleyo kwaye baqhuba i-rosari yosuku, kunye nomthandazo weerosari ezizimeleyo.
ICawe khange ilubuze oluhlobo lwentshukumo, yenze kuphela iingcebiso ukunqanda ukusetyenziswa gwenxa kunye nokugqwethwa kwembali.Siyazi ukuba iirosari yanamhlanje yinto yabantu abathembekileyo abafakelwe ngabasemagunyeni becawa, ukuze bomeleze ukholo lwamaKatolika kuThixo.
Izinto ezine ezenza iRosari kufuneka zithandazwe ngosuku oluthile lweveki ngokwesabelo sazo, kungoko zibizwa ngokuba yirosari yanamhlanje, umzekelo, qala ngokuthatha irosari kwaye uthandaze iSivumo Sokholo Sabapostile. Kwibhedi enkulu elandelayo, thandaza uBawo Wethu Osezulwini, ukuze kuthiwe kwiintsimbi ezintathu ezizayo kuthiwe Makubekho uMariya.
Kwaye ugqibezele icandelo lokuqala uthandaze eGloria, emva koko ubhengeze imfihlelo yokuqala ngokosuku oluhambelana neveki. Kwi-bead enkulu thandaza uBawo Wethu kunye nakwelinye lamashumi alishumi Bhekisa uMariya; khumbula ekupheleni kwemfihlelo nganye ukuthandaza umthandazo kaGloria kunye noFatima.
Siyathemba ukuba eli nqaku likuthandile. Sishiyele uluvo lwakho, kuthi kubalulekile ukuba wazi ukuba kukho into engekhoyo apho sinokongeza khona kumxholo wexesha elizayo; Kwakhona khumbula ukwabelana kunye nokubeka izimvo kule post kunye nabanye abahlobo bakho abathembekileyo kunye nabakholwayo kwiintanethi zentlalo.